Rosia: Firaisana ara-nofo, Vehivavy, Putin ary ny Lahatsary · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Marsa 2012 13:06 GMT
Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin'ny tatitray manokana momba ny Fifidianana ao Rosia 2011/12.
Tamin'ny lohataona lasa teo ireo vehivavy tanora dia nangataka ireo mpiara-mankasitraka mba hanàla ny akanjon-dry zareo ho an'i Putin, dia toa tahaka ny nanjavona tsy hita ny sehatra taorian'ny naha-lohateny lehibe azy ireny nandritra ny tapa-bolana. Koa satria efa akaiky ny fifidianana any Rosia, ankehitriny, tsara ny manao topi-maso ny momba ny fivoaran'ity fihetsiketsehana ity, sy ny fomba namporisihany ireo vehivavy hafa – na momba an'i Putin na manohitra azy – hanana saina mpamorona..
Eto, zava-dehibe ny famerenana mijery ny foto-pisainana ‘2.0’ izay nitombo ny fampiasàna azy tato ho ato. Wikipedia dia mamaritra ny Web 2.0 tahaka izao:
[…] fifanojoana zara raha voasoritra teo amin'ny rindrambaikon'ny aterineto no manasongadina io fifampizaràna vaovao manamora, fiaraha-miasan'ny rindrambaiko, fanomezan'endrika mifototra amin'ny mpampiasa, ary fiaraha-miasa amin'ny World Wide Web. Ny vohikala Web 2.0 iray dia ahafahan'ny mpampiasa mifandray sy miara-miasa amin'ny adihevitra momba ny fampielezam-baovao sosialy amin'ny maha-mpamorona (mpanjifa mahay) ny votoaty novokarin'ny mpampiasa tamin'ny fiaraha-monina virtoaly, tsy tahaka ireo vohikala (mpanjifa tsotra) izay tsy ahafahan'ny mpampiasa manao afa-tsy ny mijery ny votoaty novokarina ho azy ireo.
Ny fampielezan-kevitra momba ny fifidianana filoham-pirenena 2012 any Rosia dia mendrika ny omena ny anarana hoe 2.0. Tsy vitan'ny hoe namporisika ny vahoaka tamin'ny aterineto sy teny an-dalam-be izy hanao adidy ara-politika, fa koa nisarika saina mpamorona tsy nampoizina tamin'ny andaniny roa. Ny aterineto no lasa toerana fizarany izany rehetra izany, tahaka ny hoe mandray anjara amin'ny adihevitra amin'ny lahatsary mifanosona.
Mpiandany amin'i Putin
‘Putin's Army‘ (Ny tafik'i Putin) [ru] dia ohatra iray anatin'ny maro. Hatramin'ny nampalaza azy dia namoaka hira roa ny “Tafika” – ny iray amin'ireo dia ‘hira fanevany‘, ary ny iray mitondra ny lohateny hoe ‘Alefa, Vova Putin!‘ – ary lahatsary mandranitra hafa maro.
Iray amin'ireo lahatsary farany indrindra nivoaka ny andrana hira hip-hop iray, izay nahasarika – indray koa – fanehoan-kevitra somary masiaka tao amin'ny sehatra fanehoan-kevitra:
Misy iray hafa, nivoaka andro vitsivitsy talohan'ny fifidianana, mampiseho tovovavy mibika maka sary somary manaitra. Any amin'ny farany izy mamerina ny tenin'i Putin, ka raha raisina araka izay hita dia hafa mihitsy no mety ho fandraisana azy: “Raha tsy mino mihitsy ny olona fa hitsangana io, dia tsy hahita azy hitsangana mihitsy.”
Nofafàna tahaka ny tsy teo ireo hevitra maro manesoeso ilay lahatsary.
Tamin'ny fotoana nisondrotan'ny Tafik'i Putin, nisy tarika hafa, ‘Devochki Za‘ (Vehivavy mpomba [an'i Putin]), navitrika tamin'ny famoahana hira (jereo ny pejin'ny Vkontake) sy lahatsary ho fanohanana an'i Putin ihany koa. Ny lahatsary farany navoakany dia ahitàna tovovavy miady an'i Putin, izay, raha araka ny tononkira, dia tsy afa-po amin'ireo lehilahy hafa misary zoro amin'izy ireo:
Tamin'ny volana Febroary, nisy andiana lahatsary hafa nivoaka, ahitàna vondrona tovovavy izay – amin'ny toe-javatra samihafa – mitantara ny fotoana voalohany nanaovany firaisana ara-nofo, ary mampifandraika izany rehetra izany amin'i Putin. Ilay fikambanana – ‘Pervyi Raz‘ [ru] (Ny fotoana voalohany) – dia mampirisika ireo tanora mpifidy mba hivoaka ka handeha hifidy. Raha halalinina kokoa, mampirisika azy hifidy ho an'i Putin izany satria “ny fotoana voalohany indrindra dia tokony ho feno fitiavana”.
Ao amin'ny lahatsary voalohany, mitantara ny niraisany tamin'ny psikôlôgy iray ilay tovovavy:
Ny faharoa kosa dia tany amin'ny zinekôlôgy no niseho, izay hanasongadinany ny filàna fiarovantena:
Ao amin'ny horonantsary fahatelo, mangataka soso-kevitra avy amin'ny mpimasy ilay tovovavy, izay mahagaga fa nisintona karatra mampiseho an'i Putin toy ny anatina hazavàna:
Mahery fiteny avokoa ireo hafatra avy amin'ny mpijery, nefa na dia folo andro monja talohan'ity lahatsoratra ity aza izy no nivoaka dia efa nahazo maso an'aliny maro.
Manohitra an'i Putin
Ary amin'ny ankilany anefa, maro ihany ny esoeso sy ny fanoherana avy amin'ireo tovovavy. Mety hoe tamin'ny volana Aogositra ny ohatra voalohany indrindra, vao haingana taorian'ny niforonan'ny Tafik'i Putin. F1 Studio dia namokatra ity lahatsary manaraka ity ahitàna tovovavy mampiseho ny Tafik'i Putin, ary manontany ireo tovovavy hoe hatraiza no ho tongany mba hahazoana “filoha manara-penitra”:
Ho setrin'ny tetikasa “Firaisana Voalohany”, i Kseniya Sobchak, olo-malaza sady mpanolotra amin'ny fahitalavitra dia namoaka ity lahatsary manaraka ity, andro iray monja talohan'ny fifidianana, mitantara ny “Firaisana fahatelony” taminà zinekôlôgy, izay manoro azy hiova olon-tiana. Taitra izy ka nanontany hoe azo atao ve izany. “Matahotra aho hoe sao dia hahazoako aretina izany!” hoy izy. “Ohatra ilay… miloko volom-boasary.” Mampitony azy ny mpitsabo ary milaza fa afaka miaro tena amin'ny “Fotsy” izy (izany hoe ny kofehy lamba fotsy, mariky ny fanoherana).
Avy eo nisy tarika vehivavy punk, Pussy Riot [ru], izay nanao fampisehoana maimaika manerana an'i Moscou nandritra ireo volana vitsy farany teo, anisan'izany ny fampisehoana iray tany amin'ny Kianja Mena (voasambotry ny mpitandro filaminana ry zareo taorian'izany):
Izy ireo ihany koa no nitarika ny korontana tamin'ny voalohandohan'ny volana Febroary noho ny fanaovana ‘fotoam-pivavahana‘ tao amin'ny Katedraly lehibe indrindra any Moscou, ary nangataka tamin'ny Théotokos, na ny Renin'Andriamanitra [fr] mba hamono an'i Putin:
Nanomboka tamin'izay dia nanenjika ilay tarika vehivavy ny fiangonana noho ny fihantsiana fankahalàna fivavahana.
Tranga tsy zoviana amin'ireo mpandraharaha ara-barotra sy ireo manam-pahaizana amin'ny fifandraisana aman'olona izany hoe “mampidi-bola ny firaisana ara-nofo” izany. Ny fampielezan-kevitra toa izany dia mampiseho fa marina koa izany filazàna izany amin'ny sehatra politika any Rosia, ary mety ho mafana fo sy mpitondra feo ara-politika matanjaka ihany koa ny vehivavy, na amin'ny aterineto na eny an-dalam-be.